မေး - ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်ထားရရာတွင်းလိုအပ်ချက်များ
(၁) ပုဂ္ဂိုလ်(သို့)အဖွဲ့အစည်းအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံကို www. ecd. gov.mm မှရယူဖြည့်စွက်ရန်
(၂) ညွှန်ကြားရေးမှု ချုပ်ရုံး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနသို့ လိပ်မူသောလျှောက် ထားစာပါရှိရန်
(၃) အနည်းဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူကို တင်ပြရန်၊ လျှောက်လွှာတွင် အဆိုပြုလျှောက်ထားလိုသည့် ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ် နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် Certificate များအထောက် အထားလက်မှတ် များတင်ပြရန်
(၄)	Professional Resume ကိုပူးတွဲ တင်ပြရန်
(၅)	နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ Passport၊ ID တစ်ခုခုတင်ပြရန်
(၆)	အဖွဲ့အစည်းနေဖြင့် လျှောက်ထားလျှင် DICA မှ ထုတ်ပေး ထားသော Certificate ကိုပူးတွဲတင်ပြရန်
(၇)	Softcopy/ Hardcopy (၂)မျိုးလုံးတင်ပြရန်၊